WARAYSI-Madaxweyne Gaas oo dhaliilay beesha caalamka kana hadlay safarkiisa miyiga. – Radio Daljir
WARAYSI-Madaxweyne Gaas oo dhaliilay beesha caalamka kana hadlay safarkiisa miyiga.
Janaayo 25, 2017 9:28 g 0
Xaafuun, Jan 26 2017-Madaxweyanaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi uu siiyey Radio Daljir ku sheegay in beesha caalamku gabtay doorkii binu-aadanimo ee kaga aadanaa taakuleynta dadka abaaruhu saameeyeen eek u dhaqan deegaanada PL, xilli madaxweynaha iyo wafti la socda ay safar arrimahan la xiriira ku marayaa deegaanada loo naqraacay ee gobolada Bari iyo Karkaar.
Madaxweyne Gaas iyo waftiga la socda ayaa xalay ku hoyday magaalada Xaafuun. Axmed Sh Maxamed Tallman ayaa madaxweynaha kula xiriiray khadka telefoonka wuxuuna ugu horrayn weydiiyey bal waxa uu socdaalkoodu daarran yahay.
DHEGEYSO-Senator Faroole oo kahadlay lahaanshaha Muqdisho iyo dowladda dhalanaysa.